प्रदेश नम्बर २ : अव्यवहारिक र पाखण्डपूर्ण
बिहीवार, श्रावन २८, २०७२
सचिवालय सदस्य तथा मधेस ब्यूरो प्रमुख,
नेपाल भारत सम्वन्ध सुधारको निम्ति केही सातअघि युवा संघ नेपालले राजधानीमा कार्यक्रम ग¥यो, कार्यक्रमको मुख्य आकर्षक थिए भारतीय जनता पार्टीका विदेश विभाग प्रमुख विजय जोली । भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीका नजिकका सल्लाहकारको रुपमा रहेका जोलीले केही साता अघि नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी ओलीलाई प्रधानमन्त्री बन्न लागेकोमा फेसबुकबाट बधाई दिएपछि नेपाली र भारतीय राजनीतिमा चर्चा निक्कै चुलियो । युवा संघ नेपालका तर्फबाट वरिष्ठ नेता जोलीलाई नेपाल ल्याउन महत्वपूर्ण भुमिका निभाउने युवा संघको सचिवालय सदस्य एवम् मधेस ब्यूरो प्रमुख संजीव कुमार झाको पनि चर्चा एकाएक हुन पुग्यो । समकक्षीहरुलाई नबिझाउने अनि शीर्ष नेतृत्वलाई रिझाउने कौशल भएका झा प्रष्ट र तर्कसंगत बोल्ने युवा नेतामा पर्दछन् । उनीसँग पछिल्लो समयको राजनीतिक अवस्थाका बारेमा गरेको कुराकानीको प्रमुख अंश ।
- सरकार परिवर्तनका कुराहरु आइरहेको छ, केपी ओली प्रधानमन्त्री बन्ने कुरा आइरहेको छ । ओली नै प्रधानमन्त्री किन ? एमालेले नै सरकारको नेतृत्व गरे अरु पनि प्रधानमन्त्रीको उमेदवार बन्न सक्छन् नि ?
संविधान आइसकेपछि देशलाई स्थायित्व दिन एउटा कुशल नेतृत्वको आवश्यकता पर्छ, एउटा सहि निर्णय गर्न सक्ने मान्छेको आवश्यकता परेको छ त्यसैले केपी ओली जस्तो राजनेता बाहेक अरुको विकल्प नभएर उहाँको चर्चा भइरहेको हो । देशको माटोले नै अहिले केपी ओलीलाई प्रधानमन्त्रीको लागि मागेको अवस्था हो । धैर्यताका साथ उहाँको आगमनलाई नेपाली जनताले कुरेर बसेका छन् । संविधान निर्माणकै क्रममा पनि उहाँले धेरै अड्कोहरुलाई समाधान गरेर संविधान आउने सुनिश्चित बनाउनुभएको छ । उहाँको नेतृत्वकै कारण अहिलेको अवस्था आएको हो ।
भाजपाका विदेश विभागका जोलीलाई नेपाल ल्याएर कार्यक्रम पनि गर्नुभयो, केपी ओली प्रधानमन्त्री बनाउने कसरत अन्र्तगत नै जोलीलाई ल्याइएको भन्ने कुराले पनि चर्चा पायो नि ?
उहाँ विशुद्ध एउटा कार्यक्रममा आउनुभएको हो । नेपालमा प्रधानमन्त्री बनाउने भारतले होइन, त्यो त नेपालले नै हो । जोली युवा संघको एक कार्यक्रममा आउनुभएको हो । युवा संघ नेपालले कुटनीतिक सम्वन्धलाई पनि ध्यान दिने गर्दछ । राम्रो नेता जन्माउने फ्याक्ट्री पनि हो, युवा संघ । त्यसैले सबै कुराको ज्ञान राख्नुपर्ने हुन्छ । एउटा कुटनीतिक कार्यक्रमका लागि उहाँलाई बोलाइएको थियो । उहाँ आएपछि शीर्ष नेताहरुसँग भेट्ने कुरा स्वभाविक नै मान्नुपर्छ । म भारत जाँदा पनि के कुरा बुझेको छु भने छिमेकी देशमा पनि एउटा कुशल, निर्णय गर्न सक्ने व्यक्ति, दुरदर्शी नेतृत्व आएदेखि सजिलो हुन्छ भन्ने उहाँहरुको सोचाई मात्र हो तर नेपालमा को प्रधानमन्त्री बन्ने भन्ने कुरा नेपालीले नै निर्णय गर्ने कुरा हो । उहाँहरुको अलि अलि सुरक्षामा चासो हुन्छ, आन्तरिक मामिला उहाँहरुलाई चासो हुन्न । छिमेकीको एउटा सदभाव मात्र हो । उहाँहरुले शुभेच्छा राख्ने हो । केपी ओली प्रधानमन्त्री हुदाँ छिमेकी देश समृद्ध हुन्छ भन्ने उहाँहरुको चाहना होला, त्यही भएर उहाँहरु केपी प्रधानमन्त्री भएको देख्न चाहानुहुन्छ । उहाँ नेपालविज्ञ पनि हुनुहुन्छ । यो परिवेश बुझेर पनि उहाँले त्यसो भन्नुभएको हुन सक्छ । संविधान आएपछि केपी ओली प्रधानमन्त्री भन्ने लगभग पक्कापक्की भएकोले पनि उहाँले त्यस्तो प्रतिक्रिया फेसबुकमा पोष्ट गर्नुभएको हुनसक्छ ।
अब संघीयताको कुरा गर्दा प्रमुख राजनीतिक दलहरुले ६ प्रदेशमा सहमति जनाइसकेका छन् । तपाईले यसलाई कसरी हेर्नुभएको छ । नेपालको भूगोल हेर्दा कस्तो खालको संघीय संरचना हुनुपर्छ जस्तो लाग्छ, तपाईलाई ?
हामीले अहिले संघीयताको प्रयोग गर्न लागीराखेका छौ भोली सफल हुने नहुने आफ्नो ठाँउमा छ । नेपालको भूगोल, डाईभसिटी र अवस्था हेर्दा मधेशलाई छुट्टै प्रदेश दिनुपर्छ भन्ने कुराको म विरोधी हु । किन भने एउटा डाईभसिटी म्याच गर्दैन, अर्काे कुरा मधेशमा छुट्टै आयस्रोत छैन, कृषिमा निर्भर हुन परेको छ, अहिले कृषिमा लाग्ने मानिसहरु सबै बैदेशिक रोजगारीमा गएका छन्, जसका कारण कृषि पेशा कमजोर अवस्थामा छ । बैज्ञानिक कृषि पनि छैन । खनिज, जंगल, पानी सबै पहाडमा छ, यदी हामीले तराई पहाड र मधेश मिलाएर प्रदेश बनाएनौ भने यो भोकमरीमा जान्छ । त्यही भएर संघीयता हुनुपर्छ तर तराई र पहाडलाई जोडेर मात्र प्रदेश निर्माण गर्नुपर्छ भन्ने मेरो मान्यता हो ।
मधेश एक प्रदेश हुनुपर्छ भन्ने कुराहरु पनि उठेको थियो र अहिले पनि मधेस केन्द्रीत दलहरुले उठाइरहेका छन् । मधेशका स्थानियहरुको भावना चाँही के छ ?
विगतको संविधानसभाको चुनाव हेर्नुहुन्छ भने एक सय १६ वटा निर्वाचन क्षेत्रहरुमा जम्मा १२ वटा मधेशी पार्टीलाई निर्वाचित गरेको अवस्था छ । किनकी मधेशवादी पार्टीहरु सम्पूर्ण मधेश एक प्रदेशको एजेण्डा लिएर जानुभएको थियो र मधेशका जनताले उनीहरुको त्यो एजेण्डालाई नकारेर पठाइसकेको अवस्था छ । अहिले पनि विभिन्न भ्रम जालहरु फैलाएर आन्दोलन गर्दा मधेशका जनताको उपस्थिती न्युन छ । महेन्द्र राष्ट्रवाददेखि अहिलेसम्म मधेशी जनताहरु विभेदमा परेको अवस्था हो । मधेशवादी दलहरु अहिले पनि भ्रम छरेर दुःख दिने मनसायमा छन् तर मधेशका जनताहरुलाई चाँहीएको समृद्धि र विकास हो । त्यो कुराहरु उनीहरुले अहिले बुझिसकेका छन् ।
मधेशका जनताका भावनालाई मुलधारमा ल्याउने प्रयास कसरी गरिरहनुभएको छ । यतिवेला संविधानको मस्यौदालाई अन्तिम संविधानसभाको मस्यौदामा पठाइएको छ ?
हाम्रो पार्टीका अधिकांश नेताहरु मधेशबाटै जितेर आउनुभएको छ र उहाँहरुले मुलधारमा नै नेतृत्व गरिराख्नु भएको छ । मधेशी जनताहरु मुक्ति चाहन्छन्, रोजगारी चाहन्छन्, राम्रो स्वास्थ्य र शिक्षा चाहन्छन् भन्ने कुराहरु हाम्रो पार्टीले बुझेको छ र उनीहरुको भावना अनुरुप नै उत्तर दक्षिण गरेर संघीयता चाहन्छन् भन्ने कुरा पार्टीले बुझेको हुँदा त्यही भावना अनुरुप नै लागिराख्नु भएको छ र मैले पनि मधेशका भावनाहरुलाई पार्टीभित्र वहस चलाएर लगिराखेको छु । अहिले सप्तरीदेखि पर्सासम्मको भूभागलाई एउटा प्रदेश बनाइएको छ, जुन एकदमै अव्यवहारिक र पाखण्डपूर्ण देखिन्छ । अहिले हामीले पहाडसँग जोड्नु पर्ने नभएपनि कम्तिमा उदयपुर, सिन्धुली, चितवनलाई भएपनि प्रदेश नं. २ मा जोड्नुपर्ने माग गर्दै आएका छौं ।
अर्को प्रत्यक्ष कार्यकारी निर्वाचनको पनि वहस भइराखेको छ नि ?
पार्टीको भावना अनुरुपकै धारणा हो मेरो पनि, स्थायी खालको सरकार नभएको कारण विकासमा वाधा पुगेको भन्ने आइरहेको छ । संविधान भनेको सम्झौताको दस्तावेज हो, धेरै तिरको सम्झौताहरु गरेर संविधान बनाइराखिएको छ । संविधान जसरी पनि ल्याउनुपर्छ भनेर कुनै कुरामा हाम्रो पार्टी पछि हटेको छ भने कुनै कुरा अरु पार्टीहरु । सम्झौताको कागजमा केही कुरा वढी भएको छ भने केही कुरा छुटेका छन् । भोली फेरी संशोधन गर्दै अघि बढ्दै जाने कुरा हो ।
जनताका भावनाहरु पनि आइरहेको छ, के पाउनुभयो त्यसमा चाँही ?
जनतामा रिस रहेछ भन्ने कुराहरु अहिले प्रष्ट भएको छ, केही मुद्दाहरुमा आफ्नो धारणाहरु स्पष्ट पार्नुभएको छ । लगभग सबै कुराहरु संवोधन गर्न नेताहरुले चासो देखाएपनि सबै कुरा समावेश हुने देखिएको छैन । जसले चौतर्फी असन्तुष्टिको लहर चुलिएको देखिएको छ । म अहिले पनि भन्छु, एकीकृत मस्यौदा निर्माण गर्दा बढी भन्दा बढी जनमतबाट आएका सुझावहरुलाई समेट्नु पर्छ ।
यो संक्रमणकालमा युवा संघको भूमिका कस्तो छ ?
युवा संघ नेपाल पनि संविधान चाँडो भन्दा चाँडो आओस भनेर गम्भिर भएर लागेको छ । शीर्ष नेताहरुलाई झक्झक्याउन युवा संघले कछुवा जुलुसहरु लगायतका विभिन्न क्रियाकलापहरु गरेर नेताहरुलाई सचेत गराइराखेको छ । पार्टी भित्र र बाहिर गम्भिर रुपमा युवा संघ नेपाल पनि संविधान आओस् भनेर लागिरहेको छ ।
मधेशमा युवा संघको भुमिका र अवस्था के छ ?
युवा संघ नेपालप्रति मधेशका युवाहरुको निक्कै ठुलो आकर्षण बढेको छ । राष्ट्र, राष्ट्रियता, समृद्धि र विकास, उत्पादनमुखि कार्यमा जसरी युवा संघ लागेको छ, त्यसले गर्दा मधेश मात्र होइन्, हिमाल पहाडमा समेत अरु पार्टी परित्याग गरेर युवा संघमा लागिरहेको पाइन्छ ।
मधेस र मधेसीप्रति हुने विभेद तपाईं स्वयम्ले पनि अनुभूत गर्नुभएको होला, किन होला ?
जो सुकैले जे सुकै भनुन् । राणाकालदेखि नै मधेस र मधेसी जनतामाथि ठुलो विभेद र शोषण हुँदै आएको हो । मधेस र मधेसीको अधिकार माग्दा कतिपयले विद्वान कहलिएकाहरुले देशका अन्यभागको दरिद्रता देखाउँदै मधेसको मुद्दा ओझेलमा पार्ने प्रयास गर्छन् । हो, अन्य भागमा पनि समस्या छन् तर किन समस्या छ भन्ने विचार–विश्लेषण गर्नु जरुरी छ । मधेसको समस्या अलि पृथक हो । यसको सामान्य किसिमले तुलना गर्नु युक्तिसंगत देख्दिन, म । काठमाडौंमा–पहाडी क्षेत्रहरुमा मधेसीहरुलाई अझै पनि धोती भनेर जिस्काइन्छ । पहिले पहिले त झन् बुढापाकाका धोतीको पछाडी कस्ने ढिक्का समेत खोलिन्थ्यो । यस्तो असम्मानका बाबजूद मधेसमा बसोबास गर्ने पहाडी समुदायलाई मधेसीले दाजुभाई भनेर सम्मान गरेका छन्, माया गरेका छन् । समाजमा केही अबुझ लालबुझक्कडहरु हुन्छन् जसले समुदायमा फाटो ल्याउन अनेकन प्रपञ्च रचिरहेका हुन्छन् । त्यसप्रति हामी सजग हुनुपर्छ, सद्भाव विथोलिन दिनु हुँदैन । विकासको मामिलामा पनि मधेस सँधै पछाडी परिरह्यो । निर्णय गर्ने मुख्य ठाउँहरुमा कहिल्यै मधेसीहरु सबलरुपमा पुग्न सकेनन् । भलै अहिले अवस्था केही फरक होला तर यथार्थ त यही नै हो नि । विभिन्न कालखण्डमा भएका मधेस विद्रोहले यस्ता विभेदहरु चिर्न सघाएको छ । आंशिक नै सही मधेस मुलका मानिसहरु नीति निर्माण र निर्णायक तहमा पुगिरहेका छन्, पुग्नो बाटो निर्माण भएको छ, हुँदैछ । मधेस विकासको सोच पनि राष्ट्रिय सोच बनेको छ । विभेदकारी सोंचमा धेरै परिवर्तन आएको छ । तथापी कहिलेकाँही यो एक्कासी झल्केको आभाष हुन्छ तपाईंहामीलाई पनि । भारत दार्जि्लिङका प्रशान्त तामाङलाई नेपाली भनेर गर्व गर्ने तर तराईमा जन्मेका अलि कालो अनुहार भएका नेपालीहरुलाई भारतीय देख्ने सोंचले पनि समस्या सिर्जना गरेको हो । तर राष्ट्रिय राजनीतिले जसरी फड्को मार्दैछ, मलाई विश्वास छ यो विभेद पनि चाँडै हट्ने छ । जसका निम्ती हामी प्रयत्नरत छौं । भागवत गीतामा श्रीकृष्णले संगठन नै शक्ति हो भन्नुभएको कुरा बोध गर्दै हामी सबैजना एक ढिक्का भई जिम्मेवारीपूर्वक विकासपथमा अगाडि बढुनुपर्छ । परिवर्तन झ्वाट्टै कहिँकतै हुँदैन, विस्तारै हुने कुरा हो । तर सकेसम्म चाँडो गर्न भने हामीले प्रयत्न गर्नुपर्छ ।
राजनीति गर्ने व्यक्तिले व्यवसाय गर्न हुन्छ कि हुन्न ?
पेशामा राजनीती लेख्न पाइदैन । राजनीति भनेको समाजसेवा हो, त्यसैले राजनीति गर्ने मानिसले उत्पादनमुखी व्यवसाय गर्नुपर्ने हुन्छ, व्यवसायबाट आयआर्जन हुन्छ र त्यसले आफ्नो दैनिक घर खर्च चलाउनुपर्छ, राजनीति भनेको सेवा मात्र हुन्छ । राजनीति गरेर कमाउछु भन्ने सोचाई अव त्याग गर्नुपर्दछ । युवासंघका अधिकांश मानिसहरु उत्पादनमुखी काममा लागेका छन् । माछापालन, कृषि फर्महरु संचालन गरेर बसिराखेको छन्, युवा संघका साथीहरु । म आफै पनि सहकारीमार्फत कृषि र माछापालन गरिराखेको छु ।
युवा संघभित्र ठुलो विवाद देखियो होइन ?
महेश बस्नेतले पुस्तान्तरण गरेर राम्रो अभ्यास गर्नुभएको थियो । स्थायी कमिटीका साथीहरुले कसलाई निर्वाचित गर्ने भन्ने हो, त्यसमा निरु पाल अल्पमतमा पर्नुभयो । अल्पमतलाई सम्मान गर्ने हो बहुमतले निर्णय गर्ने हो । उहाँ अल्पमतमा परेपछि त्यसको प्रतिशोधमा लागेर विभिन्न क्रियाकलापमा लाग्नुभयो, जसले गर्दा युवा संघको बदनाम हुन गयो । कि त उहाँले राष्ट्रिय भेलामा आफ्नो कुरा गर्नुपथ्र्यो कि त केन्द्रीय कमिटीमा आउनुपथ्र्यो तर उहाँ दुबैमा आउनुभएन । कि त निर्णय मान्नुपर्छ कि त नेतृत्व परिवर्तन गर्नुपर्छ भन्ने हो । उहाँले दुबै गर्न सक्नुभएन । यो मिल्ने क्रममा छ, यो समस्या चाँडै समाधान हुन्छ ।
पार्टीभित्रको गुटको कारणले यस्तो हुन गयो हैन ?
पार्टीभित्रको विचार समुहहरु होलान्, स्वभाविक पनि हो, धेरै भाडाहरु एकै ठाँउमा हुदाँ भाडा त बज्छ, आवाज आउछ, त्यसरी नै लिनुपर्छ ।